Page 210 of မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ကားသတင်းများ | CarsDB
ယခုလ ၅ ရက်တွင် ဘုရင့်နောင် နှစ်ထပ်ခုံးကျော်တံတား ဖွင့်ပွဲပြုလုပ်မည်။
လာမည့် ဇန်န၀ါရီ ၅ ရက်တွင် မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ဘုရင့်နောင် နှစ်ထပ်ခုံးကျော်တံတားကို သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများနှင့် တိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးများ တက်ရောက်ဖွင့်လှစ်မည် ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ သတင်းရရှိသည်။
Posted at: 07-01-2014 06:55 AM
CNG ဆလင်ဒါအိုးများ စစ်ဆေးရာ၌ ပြန်လည်အသုံးပြုရန် မသင့်တော်တော့သည့် CNG ဆလင်ဒါအိုး အလုံးရေခုနှစ်ရာခန့်တွေ့ရှိ
ပြည်တွင်းရှိ ခရီးသည်တင်ယာဉ်လိုင်းများနှင့် တက္ကစီ အဌားယာဉ်များတွင် အသုံးပြုနေသည့် CNG ဆလင်ဒါအိုးများအား Hydro test စက်ဖြင့် စစ်ဆေးရာတွင် ပြန်လည်အသုံးပြုရန် မသင့်တော်တော့သည့် CNG ဆလင်ဒါအိုး အလုံးရေ ခုနှစ်ရာခန့်တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ CNG ဌာနခွဲ မှသတင်းရရှိသည်။
Posted at: 07-01-2014 06:32 AM
Chery QQ များကြောင့် တက္ကစီစလစ်များ ဈေးနှုန်းကျဆင်း။
Chery QQ ကားများကို အပ်နှံခွင့်ပေးပြီးနောက် တက္ကစီ စလစ်ဈေးနှုန်းများကျဆင်းသွားခဲ့ကြောင်း ကား ၀ယ်/ရောင်း များထံမှ သိရှိရသည်။ ဒီဇင်ဘာလဆန်းပိုင်းက Chery QQ ကားများကိုအပ်နှံခွင့်ပေးပြီးနောက် ထိုကားများဈေးကွက်မှာ မြင့်တတ်သွားခဲ့ပြီး ကကြီးတန်ကားများမှာ ဈေးနှုန်းကျဆင်းသွားခဲ့သည်။
Posted at: 07-01-2014 05:47 AM
MyanmarCarsDB's 2013 in Review
It is 2014 and MyanmarCarsDB has turned 2. We are proud to present you our review of Myanmar's car market in 2013.
You may checkout MyanmarCarDB's 2012 in Review too.
Posted at: 06-01-2014 11:51 AM